Alvaro Morata oo iska badelay No. 9 isagoona Xirtay Lambarka…..(Sabab CAJIIB AH oo ka dambeysa)+SAWIRRO – Gool FM
Alvaro Morata oo iska badelay No. 9 isagoona Xirtay Lambarka…..(Sabab CAJIIB AH oo ka dambeysa)+SAWIRRO
Byare August 3, 2018
(London) 03 Agoosto 2018. Alvaro Morata ayaa labada Mataano ee dhawaan u dhalatay dartood isaga badelay No. 9 isagoona xirtay No.29.
Dad badan ayaa aaminsanaa inuu Lambarka iska badelay maadaama uu nuqsi ka yahay Chelsea isla markaana ay ciyaartooy badan horey ugu fashilmeen, balse sheekadiisu midaa way ka duwan tahay.
29-kii bishii July Alvaro Morata ayaa labo Mataano ah ka helay xaaskiisa Alice, sidaa darteed wuxuu go’aansaday inuu xirto No. 29 si uu ugu xuso labadiisa wiil.
Dhaliyaha reer Spain oo sharaxay sababta uu u xirtay No.9 ayaa yiri:
“Waa Maalin aan marna ilaawi doonin oo aan Dunidan ku soo dhaweeyay labadeyda wiil ee Matanaha.
“Qoyskeyga muhiim ayay ii yihiin aniga waxaana doonayaa inaan ku sharfo iyaga iyo xaaskeyga marka aan garoonka ku jiro taasina waa sababata aan u go’aansaday inaan qaato Lambar duwan xilli ciyaareedka cusub aana xusuusnaado maalinkaan gaarka ah anigoo Lambar 2 ku daraya maaliyadeyda.
“Waan ka xumahay Taageerayaasha kuwaa oo durba iibsaday Lambarka 9-aad oo uu Magaceyga ku qoran yahay, laakiin waxaan rajeynayaa inaad fahantaan sharfideydan, taana ma noqon doonto dhibaato waxaana idin sameyn karnaa maaliyad cusub oo ku xardhan No. 29.
“Waad ku mahadsan tihiin Taageeridiin waxaana rajeynayaa in sanadkan ay jiri doonaan wax badan oo lagu dabaal dego.”.
“Mourinho wuxuu nagula dhaqmaa dabeecad ka duwan tan uu kaga soo hor muuqdo saxaafada”… Romelu Lukaku